‘डिठ्ठा साब’ले लाए ‘बुनु मैचा’ लाई शब्दसँग खेल्न नसकेको आरोप, आखिर किन ? (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainment‘डिठ्ठा साब’ले लाए ‘बुनु मैचा’ लाई शब्दसँग खेल्न नसकेको आरोप, आखिर किन ? (भिडियो)
June 7, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Kollywood, News, Videos 0
जेठ २५ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको किशोर भण्डारी (डिठ्ठासाब) निर्देशित फिल्मको यतिबेला प्रचार प्रसारलाई व्यापक बनाईएको छ । टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने ‘डिठ्ठा साब’ का निर्देशक तथा निर्माता समेत रहेका भण्डारीले निर्माण गरेको यो फिल्म पनि हाँस्य जनरामा निर्माण भएको फिल्म हो । किशोर यो फिल्मको निर्देशक र निर्माता दुबै रहेका छन् ।
‘डिठ्ठा साब’ मा उनीसँगै झुल्किने अर्की पात्र रेश्मा तिमिल्सिना ‘बुनु मैचा’ पनि यो फिल्मकी एक मुख्य कलाकारका साथै निर्माता पनि हुन् । यतिबेला दुबैजनालाई फिल्मको प्रमोशनकाबारे अन्तरवार्ता दिन पनि भ्याई नभ्याई छ । ‘बुनु मैचा’सँगै अन्तरवार्तामा उपस्थित ‘डिठ्ठा साब’ ले फिल्म चंगाको बारेमा सकेसम्म प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । उनले ‘चंगा’ लाई आफूहरुले प्रतिकात्मक रुपमा फिल्मको नाममा प्रयोग गरेको बताए । फिल्ममा अंकित खड्का, लक्ष्मी बर्देवा, रेश्मा तिमिल्सिना, जीवन भट्टराई, कमलमणि नेपाल, बु्द्धि तामाङ लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।